Mo Farax oo lagu daray diiwaanka dadka la sharfay sanadka cusub – Tusmoonline.com
Mo Farax oo lagu daray diiwaanka dadka la sharfay sanadka cusub
Wararka	December 31, 2016	91	Like
Mo Farax ayaa ku guuleystay bilado badan oo dahab ah kuwaas ayaana sabab u ah in lagu daro diiwaanka boqoradda UK ee dadka la sharfay. Waa riyo u rumowday Mo Farax oo uu doonayay muddo, sida ay sheegayaan dadka ku dhow.
Image captionbiladaha uu ku guuleystay Mo Farax
Mo Farax oo 33 sano jir ah, wuxuu helay laba billadood oo dahab ah oo isku xiga tartankii Rio, taas oo ahayd guushiisii afaraad ee dahabka. Wuxuu noqday qofka labaad ee keli ah ee dahab ka qaata tartamada Olimbikada ee 5,000m iyo 10,000m.
In la sharfo waxay uga dhigan tahay inuu safarkii dheeraa ee uu u maray uu soo afjaray Mor Farax. Orod yahankan ayaa asigoo sideed sano jir ah galay dalka Britain, wuxuuna ka tagay Soomaaliya.
“Dibu milicsiga wiilkii yaraa ee Soomaaliya ka yimi ee halkan imaaday, kaas oo aan erey English ah aqoon, ma saadaalin karin lahayd inaan maanta meeshaan joogaayo. Waa riyo rumowday,” ayuu yiri Mo Farax.
March 15, 2018	296	1
February 26, 2018	490	1
February 24, 2018	474	1
February 24, 2018	865	Like
December 24, 2017	938	2
January 15, 2017	964	2
January 8, 2017	487	2
January 4, 2017	5501	Like
January 4, 2017	587	3
January 3, 2017	1134	2